ओली राजावादी शक्तिसँग मध्यरातमा अज्ञात ठाउँमा भेट्छन, खतरनाक योजना बनाउँदैछन्’ – Karnalikhabar
ओली राजावादी शक्तिसँग मध्यरातमा अज्ञात ठाउँमा भेट्छन, खतरनाक योजना बनाउँदैछन्’
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राजावादी शक्तिहरुसँग भेटेर खतरनाक योजना बनाउने गरेको जिकिर गरेका छन् । सोमबार युवा संघको कार्यक्रममा उनले ओली राजावादी शक्तिहरुसँग मध्यरातमा अज्ञात ठाउँमा बसेर खतरनाक योजनाहरु बनाउने गरेको आरोप लगाएका हुन् । नेता नेपालले ओली विगतदेखि नै गणतन्त्रको पक्षमा नभएको पनि बताए ।
उनले तत्कालिन एमालेमा आफ्नो पक्षमा रहेका ‘दश भाइ’ नेताहरुकै सहारा र सहयोगमा ओलीविरुद्धमा लागेको भए पनि आफूले उनीहरुबाट धोका पाएको बताए । नेपालले तत्कालिन समयमा आफू ओलीका विरुद्धमा चट्टानी अडानका साथ उभिएको पनि बताए ।
माधव नेपालले भने, ‘दश भाईको सहारामै म अगाडी बढेको थिएँ । र सहयोग पनि गरेका हुन् । चुनौती दिने बेलामा पनि साथ दिएकै पनि हुन् । तर ऐन, मौकामा धोका दिने स्थिति बन्यो । एक्लो म रहनुपर्ने स्थिति बन्यो । एक्लो बृहस्पति । सतिसाल झैं दृढताका साथ उभिएको । चट्टानी अडानका साथ उभिएकै हो । इतिहासमा यस्ता समयहरु आउँदा रहेछन् । जब गणतन्त्रको बारेमा हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा बहस गरिरहेका थियौँ । पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वभित्र नै विवाद भयो । पूराना नेताहरुमध्येका नेताहरुले नै गणतन्त्र ल्याउन सम्भव छैन भने । तर केन्द्रीय कमिटीको अत्याधिक बहुमतले गणतन्त्र ल्याउन सम्भव छ भन्यो । सम्भव छ भन्ने कुराको अगुवाई मैले गरें । सम्भव छैन भन्ने कुराको अगुवाई केपी ओलीले गरे ।’
उनले थपे, ‘दुईवटा विचारमा भिन्नता भयो । परिणामले के देखायो, सम्भव छैन भन्नेले टाउको फोडे पनि बयलगाढा चढेर अमेरिका जानु र राजतन्त्र ढाल्नु एउटै कुरा हो भन्ने बयलगाढा दर्शनका हिमायती, दर्शनका प्रवक्ता केपी ओली उनी ट्वाल्ला हेरेको हेरै भए । ट्वाँ परे राजतन्त्र ढलेको देखेपछि । अहिलेसम्म पनि उनी राजावादी शक्तिहरु सँग मध्यरातमा गएर गोप्यरुपमा भेट गर्ने गर्दछन् भन्ने सूचनाहरु चुहिने गरेको छ । कालो सिसाको गाडीमा चढेर, अर्कोले ड्राइभ गरेर कहीँ पु¥याउने गर्दछ र भेटघाट गरेर खतरनाक योजनाहरु बनाउने गरेको भन्ने सुन्नमा आउँछ । हुन त पहिले पनि विदेशी जासुसी संस्थाका प्रमुखसँग मध्यरातमा बालुवाटारमै प्रधानमन्त्रीको निवासमा एक्लै भेटघाट गरेको, गोप्य भेटघाट गरेको र कुटनीतिक हिसाबले नसुहाउँदो भेटघाट गरेको कुरा त सार्वजनिक भइसकेकै छ ।’
अध्यक्ष नेपालले ओलीसँग विद्रोह गर्न नसकेकाहरु एमालेमा निरीह भएर बसेको टिप्पणी गरे । उनीहरुलाई कमिटीमा एक शब्द पनि बोल्न नदिइएको, छलफल र परामर्शमा भाग लिन नदिएको भन्दै उनले आफूहरु त्यसैगरी बेइजत नहुनका लागि एमाले छाडेको बताए । एमालेले गुण्डा जमात तयार पारेकाले त्यहाँ फरक मत राख्नेलाई हातपात पनि हुनसक्ने नेपालले बताए ।
उनले भने, ‘किन पार्टी फोड्नु भयो त ? किन पार्टीबाट अलग हुनु भयो त ? किन केपी ओलीसँगै बस्नु भएन त ? भनेर प्रश्नहरु तपाईंहरुको बिचमा उठ्ने गर्दाहोलान् । तर प्रमाण आफैँ पर्याप्त छ । केपी ओलीसँग विद्रोह नगरेर बसेका ती साथीहरुको हबिगत देखिसकेपछि, निरीह भएर बसेको देखेपछि, कमिटीमा एक शब्द बोल्न नदिने कुरा देखिसकेपछि, छलफल, परामर्श हुन नदिने स्थिति देखेपछि अनि त्यहाँ बेइजत हुनका लागि हामी बस्नुपथ्र्यो त ? त्यहाँ त हातपात गर्न पनि बेर छैन । किनकी त्यहाँ गुण्डा जमात तयार ग¥या छ । नेताहरुको मानमर्दन गर्नलाई त छदैछ, साइबर स्याल । त्यसको अग्रपंक्तिमा केपी ओली बसेका छन् । जसले अरु कसैको मान, मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा, कदर केही पनि गर्दैन ।’
अघिल्लो - टर्कीका अभिनेता दुज्यातान नेपाल आउने
अर्थमन्त्रीको प्रश्न : ‘बैंकर र व्यवसायी एउटै हुँदा अर्थतन्त्रलाई के फाइदा ?’ - पछिल्लो